Method maka ịchọputa mmiri vepo transmittance nke Medical Packaging - China Wellform Packaging Group
email Nkwado Wellform.Inquiry.Google@outlook.com
T-uwe elu Bag
ọrụ ebere bag
e biri ebi T-uwe elu bag
nkeewa akara T-uwe elu bag
T-uwe elu akpa on mpịakọta
Drawstring ahihia Bag
Mkpofu akpa on mpịakọta
Star Kaakwa ya akara ahihia Bag
Food mbukota akpa
Mkpụrụ osisi na akwukwo nri Bag
ere ure Bag
100% Compostable PBAT & Ọka Starch Bag
D2W & epi nwekwara Degradable Bag
ụlọ ahịa akpa
Die ịkpụ handle bag
Loop handle ebu Bag
Disposable Pee Uwe mkpuchi akwa
Method maka ịchọputa mmiri vepo transmittance nke Medical Packaging
Method maka nnyocha mmiri vepo permeability nke ọgwụ na ahụ ike na akpa
Medical akpa na ya ìhè arọ, elu ike, mma akara na nsogbu ndị ọzọ uru, na-eji nwayọọ nwayọọ dochie ọgwụ iko karama, na ọtụtụ-eji onu siri ike na nkà mmụta ọgwụ na mmiri mmiri na nkà mmụta ọgwụ nkwakọ Atiya. Mmiri vepo bụ ihe dị mkpa ihe na-emetụta àgwà na nchekwa nke ọgwụ ọjọọ, iji zere mmetụta nke mmiri vepo na ọgwụ ọjọọ, ọgwụ na ahụ ike na akpa kwesịrị nwere magburu onwe iguzogide mmiri iji hụ na ngwaahịa mma na nchekwa. Na nke a akwụkwọ, na mmiri vepo permeability ule usoro ahụike akpa na-eji nkenke oge ẹkenam ke Nchikota na Labthink si PERME ọtụtụ BMI W3 / 330 mmiri vepo nnyefe ọnụego ule usoro.
Mmiri vepo nnyefe ọnụego bụ tumadi na-ezo aka ike na-akpa na-akpa iche nke mmiri vepo, mmiri na-eguzogide ọrụ ozugbo na-emetụta àgwà nke ọgwụ ọjọọ na adị ndụ nke ibu, ma ihe dị mkpa na analysis of adị ndụ. Mgbe nnyocha ike ijikwa na mmiri vepo-mwute na omume nke ọgwụ ọjọọ dee mmiri moldi ajụjụ.
Labthink W3 / 330 mmiri vepo permeability ule usoro, electrolytic mmetụta ule ụkpụrụ, ngwaọrụ eji atọ ule ulo ike ngọngọ nke patented technology, kọmputa akara, n'ụzọ zuru ezu n'ọrụ ule, clamping samples, pịa na nnwale na ike ibute inwe, na- ụzọ na-akwụsị ndị iru mmiri, okpomọkụ, eruba ọnụego na ndị ọzọ na ebumnobi nke-achịkwa, ihe ibuo ẹkụre ụzọ mata na nke okwu. The ngwá nwekwara ike jikọọ itoolu satellite igwe, a ule nke 30 samples na njedebe, ma na ime ihe nke ogo akpaaka, ule ike, nnyocha mkpebi na nnyocha ókè ruru mba elu larịị, na ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ Ọzọkwa nọgidere na-enwe a na-eduga .
The ibuo usoro bụ dị ka ndị: tupu emeso ọnya sample-etinye na ule ulo, na nitrogen nke dị mkpa iru mmiri na-arụ ọrụ na-abụghị nke ọnya mkpọ. The elu-adị ọcha nitrogen bụ ọrụ n'ime ọnya mkpọ n'ihi na nke ọnụnọ nke a mmiri grajentị, The Alụlụụ ụmụ irighiri gabiga film si n'èzí nke ọnya na n'ime elu-adị ọcha nitrogen, ebu site n'ọrụ nitrogen na mmetụta, site na ihe mmetụta tụọ mmiri vepo ịta analysis, wee gbakọọ mmiri vepo permeability na ndị ọzọ kwa na The eguzogide nke ule sample e inyocha.
N'ezie, na huu ahụ ike na nkwakọ akpa nke mmiri vepo site na iche na mgbe-agafe, ma mkpa ụfọdụ ndị ọzọ zaa ndị dị otú ahụ dị ka mmiri na-eguzogide, akara, wdg ịchịkwa, iji hụ na àgwà nke ibu n'oge adị ndụ.
Post oge: Jun-13-2018
Wellform nkwakọ Group Co., Ltd. (WPG) e n'ichepụta na ahịa niile iche nke na-echebe, mgbanwe nkwakọ ngwaahịa na-ebi akwụkwọ na ngwaahịa ruo ọtụtụ afọ.
Method maka ịchọputa mmiri vepo ebunye ...
Olee otú e kwesịrị mkpụrụ-chebere